Iihotele kunye neeResti zaseSt. Regis zenza ukuba iJordanian iqale ngepropathi yeAmman
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Iihotele kunye neeResti zaseSt. Regis zenza ukuba iJordanian iqale ngepropathi yeAmman
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • IJordani Breaking News • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iihotele nee Resorts zaseSt. Regis namhlanje ubhengeze ukuvulwa kweSt. Regis Amman, ephawula ukuqala kwempawu zodidi oluphezulu eBukumkanini baseJordani. Ukwandisa ilifa losapho lakwa-Astor ukusuka kwi-Fifth Avenue eNew York ukuya kwi-5 ye-Amman Circle, iSt. Regis Amman idibanisa ubugcisa kunye nelifa lemveli lehotele yaseSt. Regis eNew York kunye nenkcubeko etyebileyo yaseBedouin yaseJordani. Ngoku, inkonzo eyaziwayo ye-Butler Service, izithethe kunye namasiko atyebileyo aya kunceda ekungeniseni ixesha elitsha lokunethezeka kwidolophu elikomkhulu laseJordani.
"Ukuqala kweSt. Regis e-Amman kubonisa inqaku elibalulekileyo lophawu njengoko iqhubeka nokukhula kwiindawo ezifunwa kakhulu kwihlabathi liphela," utshilo uLisa Holladay, iNkokeli yeBrand Brand, iSt. Regis Hotels & Resorts. “IJordani yindawo ebalaseleyo engaqhelekanga esele inexesha elide izisa abahambi kwihlabathi ngamandla ayo amangalisayo, inika umxube odlamkileyo wembali, inkcubeko kunye nesiko. Ukusuka kweyona dilesi ibalaseleyo yesixeko, iSt. Regis Amman ibonelela iindwendwe ngesango eliya kwilizwe elinomtsalane kwaye lahlukahlukene, ukusuka ku-Amman ophithizelayo ukuya ePetra ekubetheni igolide yegolide kunye neesanti ezinkulu zeWadi Rum, ngalo lonke eli xesha bebonelela ngamava amnandi iSt Regis iyaziwa. ”